अष्ट्रियामा हेर्नुहोस् - के गर्ने र सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरूमा भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
उत्तम तपाईं गर्न र अस्ट्रिया मा हेर्न सक्नुहुन्छ
सुसाना Godoy | | अस्ट्रिया
किनकि जब हामी कुनै स्थानहरूमा यात्रा गर्दैनौं जहाँ हामी पहिले कहिल्यै गइरहेका थिएनौं, हामी कुनै पनि विवरण हराइरहेको बिना सबै कुरा हेर्न चाहन्छौं। तर तपाइँले यात्राको रमाईलो गर्नुपर्दछ र यो सधैं स्मारक वा कुञ्जी कुनामा खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरा हुँदैन। तर अर्को दृष्टिकोणबाट उत्तम अनुभवहरू बाँच्नको लागि केहि मिनेट रोक्नको लागि कसरी थाहा छ। त्यसकारण, आज हामी टिप्पणी गर्दछौं के गर्ने र अष्ट्रियामा हेर्नुहोस्.
Un धेरै भेट्नको लागि जादुई ठाउँ, तर रमाईलो गर्न पनि पर्याप्त, तपाईंको बसाई लामो छैन भने पनि। त्यहाँ अस्ट्रियामा तपाईले गर्न सक्नुहुने धेरै चीजहरू छन्, तर हामी तपाईंलाई आवश्यक चीजहरू र सबै चीजहरू छोडछौं जुन यसको लायक छ। यो केवल तपाइँ आफैलाई व्यवस्थित गर्न को लागी बाँकी रहन्छ र ती अधिक बनाउन!
1 भियनामा शाही महलहरू
2 ग्रसगलॉकनर रोडमा भएको दृश्यको आनन्द लिनुहोस्
3 अष्ट्रियामा के हेर्ने: साल्जबर्ग
4 अस्ट्रियामा स्कीइ
5 वाटसनमा क्रिस्टल वर्ल्ड्स
6 हलस्ट्याट, ताल ताल
भियनामा शाही महलहरू
औट्रियाको राजधानी धेरै स्थानहरूको लागि विचार गरीरहेको छ। हुनसक्छ यो उल्लेख गरिनु पर्छ कि उनी सबै एक महान सुन्दरता हो। तर पक्कै पनि, जस्तो कि हामी सँधै गन्ती दिनहरू सहित जान्छौं, हामीले उनीहरूको फाइदा उठाउनु पर्छ। यस कारणका लागि, एक आवश्यक भ्रमण शाही दरबारहरू हो। सबै भन्दा महत्वपूर्ण हो हफबर्ग दरबार जुन सबैभन्दा ठूलो र प्राचीन पनि छ। भनिन्छ कि यो तेह्रौं शताब्दीको हो, यद्यपि यो सत्य हो कि यसका केही विस्तारहरू थिए।
अर्कोतर्फ, हामी फेला पार्दछौं Belvedere दरबार जुन १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। यो दुई भवनहरू मिलेर बनेको छ र ठूलो बगैंचाद्वारा विभाजित गरिएको छ जुन तिनीहरूलाई वरिपरि जादुई तरिकाले घेरिन्छ। अन्तमा, हामी भेट्छौं Schönbrunn दरबार। योसँग ठूला बगैंचा पनि छ र युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा घोषित भएको छ। यस अवस्थामा यसलाई सत्रौं शताब्दीमा राख्नुपर्दछ।
ग्रसगलॉकनर रोडमा भएको दृश्यको आनन्द लिनुहोस्
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि सडक अस्ट्रियामा के गर्ने र हेर्नको लागि अंश होईन, तर यो अवस्थामा यो छ। तीव्र वक्र, विभिन्न ढलानहरू तर दुबै पक्षमा धेरै सुन्दरताको साथ क्षेत्र। भनिन्छ युरोपमा सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक। यसको माध्यमबाट जाँदा तपाईंलाई केहि समय लाग्नेछ किनकि यो kilometers kilometers किलोमिटर हो, तर कुनै श .्का बिना, तपाईं यस अवसरलाई अमर बनाउन बिभिन्न अवसरहरूमा रोकिनुहुनेछ।
तपाईं हिमनदीहरू नबिर्सू, चराहरू र तालहरूको मजा लिनुहुनेछ। त्यो याद गर्नुहोस् राती खुल्दैन र हो मेदेखि अक्टुबर सम्म। त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन् जसले पहुँच गर्दछ, विश्वभरिबाट। जे होस् २०२१ सालदेखि मेक्सिकनहरू उनीहरूलाई EITAS को आवश्यकता पर्दछ EU प्रवेश गर्न सक्षम हुन र दृश्यहरू र यस जस्तो स्थानहरूको मज्जा लिन। नयाँ हुनेछ मेक्सिकोबाट युरोप यात्रा गर्न आवश्यकताहरू.
अष्ट्रियामा के हेर्ने: साल्जबर्ग
यसको बाह्य सौन्दर्यको अतिरिक्त, जुन प्रत्येक कुनामा प्रशंसा गर्न सकिन्छ, यो पनि आन्तरिक एक हो। यो त्यस्तो ठाउँ हो जुन ग्रीष्म festivतुका महोत्सवहरू आयोजना गर्दछ र यो त्यो हो, हामीले त्यो याद गर्नुपर्दछ Amadeus मोजार्ट जन्म भएको देखे। यसको ऐतिहासिक केन्द्रमा क्याथेड्रल, साथ ही सान पेड्रो वा मठको अबी छ। यसमा धेरै दरबारहरू र संग्रहालयहरू भ्रमण गर्न लायक पनि छन्।
यो अस्ट्रियामा गर्न र हेर्नको लागि अर्को चीज हो। किनभने त्यहाँ धेरै उत्तम पोइन्टहरू छन् यो खेल अभ्यास गर्न सक्षम हुन। यद्यपि यो त्यो भन्दा धेरै छ, किनकि यो पनि तिनीहरूको परम्परा वा संस्कृतिको हिस्सा हो। तसर्थ, हामीले खातामा लिनको लागि असंख्य क्लूको बारेमा कुरा गर्नु पर्छ। उदाहरणको लागि, हामी फेला पार्दछौं लन्डन आल्प्सको फेदमा, फुर्सतको गतिविधिहरूको साथ। अवश्य पनि, सबैभन्दा प्रसिद्ध अर्को ईशगल हो, धेरै ढलानहरू र अचम्मका दृश्यहरूका साथ। नबिर्सिनु Sölden वा Kitzbühelजहाँ हामी एक ऐतिहासिक शहर खोज्दैछौं, धेरै पर्यटकहरु संग, जो सधै स्की आउँदैन।
वाटसनमा क्रिस्टल वर्ल्ड्स
को स्वारोवस्की उत्पादनहरू तिनीहरू वाट्टेनमा आधारित छन्। केहि लक्जरी डिजाइन जुन पहिले नै विश्वभरि प्रख्यात छ र त्यसैले तपाईले एक ठूलो ठाउँ समर्पित गर्नुपर्दछ पूर्ण आनन्द लिन। क्रिस्टल वर्ल्ड्स भनेको थिम पार्क हो जुन हामीले इन्सब्रकबाट १ kilometers किलोमिटर टाढा वाटन्समा फेला पार्नेछौं। यो कसरी कम हुन सक्दछ, यसका ठूला बगैंचा, संग्रहालय र एउटा रेस्टुरेन्ट साथै खेल मैदानहरू छन्, ताकि हामी सम्पूर्ण परिवारसँग जान सकौं।
हलस्ट्याट, ताल ताल
हामी तालको किनारमा भएका गाउँहरू बिर्सन सक्दैनौं, किनकि तिनीहरू सुन्दरताका साथै उनीहरूमा सास फेर्ने शांतिको कुरा गर्ने आधार पनि हुन्। यो भन्नु पर्दछ कि १ th औं शताब्दीसम्म यो केवल डु by्गामा मात्र पुग्न सकिन्छ, वा एकदम साँघुरो सडकबाट। यस शहरका केही मुख्य ठाउँहरू यसको नुनको खन हो, जुन विश्वमा सब भन्दा पुरानो हो। साथै यसको मुख्य वर्ग जसमा अनुहारहरू र विभिन्न फूलहरूले भरिएको छ। यसमा तीनवटा चर्च र पुरातात्विक उत्खननहरू पनि छन् रुडल्फ टावर, जुन १th औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। अस्ट्रियामा त्यहाँ धेरै कुरा हेर्न र गर्न सकिन्छ जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यसलाई एक उत्कृष्ट पर्यटन क्षेत्र मानिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » अस्ट्रिया » उत्तम तपाईं गर्न र अस्ट्रिया मा हेर्न सक्नुहुन्छ